daadah.com - kansarka
Posts Tagged ‘kansarka’
Leukemia waa kansarka dhiigga ku dhaca. Kansarkaani wuxuu ka biloowdaa dhuuxa lafaha dhexdooda ku jira. Dhuuxu waa nudayaasha laga sameeyo unnugyada dhiigga. Qofka caafimaadka qaba dhuuxa dhexdiisa waxaa lagu sameeyaa: White blood cells: oo ah unugyada cad-cad ee dhiigga. Unugyada cad-cadi waxay jirka ka difaacaan jeermisyada cuddurada keena. Red Blood cells: oo ah unugyada cas-cas
Kansarku wuxuu ka bilaabmaa unugyada jirka oo ah aasaaska nolosha binu-aadamiga. Jirka aadamigu wuxuu u baahan in la sameeyo unugyo cusub marka baahi timaado. Unugyada jirka aadamiga waxay ka kooban yihiin bilaayiin iyo bilaayiin unug oo leh cimri qiyaastii afar billood ah. Unug kasta marka uu gaboobo waa la badalaa oo waxaa la sameeyaa unug